Indawo Yokupaka Yendlu Yomqeqeshi W Okokuzithokozisa Okuyingqayizivele Kwendlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Y - I-Airbnb
Indawo Yokupaka Yendlu Yomqeqeshi W Okokuzithokozisa Okuyingqayizivele Kwendlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Y
Indlu encane ibungazwe ngu-Brett
Phuza ekuseni futhi uzizwe ugcwele izwe ngalesi sikhala esiklanywe ngokwezifiso. Izingodo eziveziwe, usofa wesikhumba othokomele kanye negceke elingasese elicelile kudala umuzwa othokomele, wasekhaya futhi unikeza isikhashana sokuzola enhliziyweni yedolobha. Jabulela iphansi elifudumalayo, nendawo yomlilo evuthayo izinkuni (Nokho anginikezi izinkuni noma okokubasa/iziqalisi) ebusika nendawo evulekile yangaphandle yegumbi lokuphumula ehlobo. Kuzwakala sengathi usekhabetheni ehlathini... kodwa uthole ukunethezeka kwenye yezindawo ezihamba phambili zase-Toronto (Leslieville) amathiphu akho eminwe.
Phuza ekuseni futhi uzizwe ugcwele izwe ngalesi sikhala esiklanywe ngokwezifiso. Izingodo eziveziwe, usofa wesikhumba othokomele kanye negceke elingasese elicelile kudala umuzwa othokomele, wasekhaya futhi unikeza isikhashana sokuzola enhliziyweni yedolobha. Jabulela iphansi elifudumalayo, nendawo yomlilo evuthayo izinkuni (Nokho anginikezi izinkuni noma okokubasa/iziqalisi) ebusika nendawo evulekile yangaphandle yeg…
I-fireplace esendlini, I-Netflix, I-Smart TV, Ukushisiswa phansi, Umatilasi oyi-Pillow-top, umbhede we-queen, Umshini womoya oqandisayo
4.98 (izibuyekezo ezingu-433)
I-Quaint Leslieville ifana nedolobhana layo ngaphakathi kwedolobha, kodwa iwuhambo lwemizuzu engu-20 kuphela ukusuka edolobheni. Amabhikawozi, isitolo sikashizi, ibhula, igrosa ephilayo, izitolo zekhofi nezindawo zokudlela, kanye nezitolo zokudlela konke kungaphakathi kwamabhulokhi ambalwa.
Imizuzu engu-9 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Inombolo yepholisi: STR-2011-GTDRVH